प्रदेश १ मा २ अर्ब ५० करोड बढी मूल्यको धान-चामल भारतबाट आयात
विराटनगर । अन्न भण्डारको रुपमा चिनिने प्रदेश नं. एकमा २ अर्ब ५० करोड बढी मूल्यको धान-चामल भारतबाट भित्रिएको छ । प्रदेश नं. एकका मुख्य दुई नाका काँकडभिट्टा र विराटनगरको रानीबाट चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६ करोड ६३ लाख केजी धान-चामल भित्रिएको हो ।
रानी नाकाबाट २ अर्ब २४ करोड मूल्यको ५ करोड केजी धान-चामल प्रदेश एकमा ११ महिनाको अवधिमा भित्रिएको छ । त्यसैगरी काकडभिट्टा नाकाबाट सोही अबधिमा ५४ करोड २ लाख ४० हजार मूल्यको १ करोड ६३ लाख केजी धान-चामल भित्रिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सुनिता पौडेलले जानकारी दिइन् । यसबाहेक मकैै, कोदो र फापर पनि भित्रिएको छ ।
१५ वर्षमा ५४ हजार हेक्टर धानखेत मासियो
बर्खे र चैते धान गरी प्रदेश १ मा ११ लाख ९८ हजार ७ सय ४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । तर अधिकांश प्रदेश १ वासीले भारतबाट आयात गरिएको चामल उपभोग गर्ने गरेका छन् । जसका कारण बर्सेनि धान-चामल खरिदका लागि करौडौं नेपाली रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।
प्रदेश एकको कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा समग्र कृषि क्षेत्रको योगदान ३६ प्रतिशत छ । धानको मात्रै योगदान १९ प्रतिशत छ । अनलाइन खबर बाट
विराटनगरको सिंघिया खोलामा एक महिलाको शव फेला